२९ प्रतिशत औषधि गुणस्तरहिनः एक सय २७ स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनी जीएमपी मापदण्ड बाहिर | Hamro Doctor News
शनिबार, ७ भदौ २०७६ /
२४ औं वर्षमा इसान बाल तथा महिला अस्पतालः १०० शैयासहितको नयाँ भवन बन्दै
आइसियू लैजाँदैमा सबै बिरामीको मृत्यु हुँदैन
पाठेघर खस्ने समस्याबाट बच्ने उपाय
साइकल चढ्नाले के पुरुषहरूको यौन स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्छ ?
पतञ्जलीका आचार्य बालकृष्ण एम्स अस्पतालमा भर्ना
२९ प्रतिशत औषधि गुणस्तरहिनः एक सय २७ स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनी जीएमपी मापदण्ड बाहिर
काठमाडौं, ९ वैशाख । औषधि व्यवस्था विभागको बजार अनुगमन प्रतिवेदन अनुसार वार्षिक ७ देखि १४ प्रतिशत औषधिको स्तर तोकिए अनुसार छैन । नेपालमा उपलब्ध २९ प्रतिशत औषधि कुनै पनि देशको फर्माकोपीयामा आधारित नरहेको पाइएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०१७ अक्टुवरमा प्रकाशन गरेको अध्ययन रिर्पोटले यस्तो देखाएको हो ।
औषधि व्यवस्था विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार नेपालमा दर्ता भएका एक सय ४४ मध्ये एक सय २७ स्वदेशी उत्पादक कम्पनी विश्व स्वास्थ्य संगठनको असल उत्पादन अभ्यास बमोजिम प्रमाणित नरहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय औषधि कुशल उत्पादन अभ्यास संहिता, २०७२ अनुसार एक सय ३२ उत्पादकले प्रमाणपत्र लिएका छैनन् ।
विभागमा दर्ता भएका ८० आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक मध्ये कुनैले पनि राष्ट्रिय औषधि उत्पादन कुशल अभ्यास संहिता प्रमाणपत्र लिएका छैनन् । सिंहदरवार वैद्यखाना लगायतका सरकारी औषधि उत्पादकले समेत कुशल औषधि उत्पादन संहिताको पालना गरेका छैनन् । औषधिमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थहरुको स्तर तथा मापदण्ड हालसम्म तोकिएको अवस्थामा छैनन् । औषधि उत्पादकको एक्टिभ फर्मास्यूटिकल्स ईन्ग्रीडिएण्टस् (एपीआइ) को विश्व स्वास्थ्य संगठन असल उत्पादन अभ्याससम्बन्धी अडिट पनि हालसम्म भएको छैन ।
आयात गरिने औषधिहरु नेपालको भन्सार विन्दुमा जिएमपी गुणस्तर परीक्षण गर्ने संयन्त्र बनिनसकेको अवस्थामा बजारमा उपलब्ध औषधिको स्तरमा पूर्णतः आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था भने रहेको छैन । नीतिअनुरुप औषधिको स्तर कायम गर्न प्रभावकारी कदम पनि सरकारी पक्षले चालेको पाइदैन् ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ मा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा आपूर्ति हुने आन्तरिक उत्पादन वा आयात गरिएका औषधि, औजार, उपकरण तथा प्रयोगशालामा प्रयोग हुने सामग्रीको स्तर मापदण्ड अनुसार भएको सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय औषधि कुशल उत्पादन अभ्यास संहिता, २०७२ मा कुशल उत्पादन अभ्यास बमोजिम उत्पादक दर्ता भएको हुनु पर्ने उल्लेख छ । औषधि ऐन, २०३५ को दफा १३ मा तोकिएको स्तर बमोजिम नभएको औषधिको उत्पादन, विक्रि वितरण, निकासी पैठारी, संचय तथा सेवन गर्न गराउन नहुने भनी उल्लेख गरीएको छ । तर यो नियम भने लागु भएको छैन् ।
राष्ट्रिय औषधि नीति, २०५१ र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ मा यस्तो व्यवस्था गरीएको छ ।
५ क्षेत्रमा औषधि व्यवस्था विभागका क्षेत्रीय शाखाहरु स्थापना गर्ने,
औषधिको गुणस्तर नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय प्रयोगशालाको क्षेत्रीय शाखाहरु स्थापना गर्ने,
भन्सार विन्दुमा आयातित औषधिको असल उत्पादन अभ्यास (जीएमपी) आवश्यकता अनुसारको नमूना परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
औषधिको उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको स्तर सहितको नेपाली फर्माकोपिया निर्माण गर्ने,
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा औषधि उत्पादनसँग सम्बद्ध निकायहरुबीच समन्वय गर्न औषधि मामिला इकाईको स्थापना गर्ने,
औषधि व्यवस्था विभागको पुनर्संरचना गरी प्रत्येक जिल्लामा आवश्यक संख्यामा औषधि निरीक्षकको व्यवस्था गर्ने ।
तर, नीति कार्यन्वयन हुन नसकी औषधि वितरण एवं गुणस्तर व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
वार्षिक ७ देखि १४ प्रतिशत औषधि तोकिएको स्तर विपरित
सन् २०१४ मा तोकिएको स्तर अनुसार नदेखिएका औषधिको संख्या ९९ रहेको छ । अनुगमनमा नमुना परिक्षण ६ सय ८७ औषधिको गरिएको थियो । दर्ता भएका औषधिका प्रकारहरु १५ हजार दुई सय ४७ रहेको थियो ।
२०१५ मा दर्ता भएका औषधि १६ हजार एक सय ९२ रहेका थिए भने ८ सय दुईको परिक्षण गरिएको थियो । जसमध्ये ५८ औषधि तोकिएको स्तर अनुसार नभएको पाइएको हो ।
०१६ मा ८२ प्रकारका औषधि तोकिएको स्तर अनुसार नभएको पाइएको छ । आठ सय ८२ औषधिको परिक्षण गरिएको थियो भने १७ हजार एक सय ६२ औषधि दर्ता भएका थिए ।
त्यस्तै ०१७ मा ६६ औषधिका प्रकार तोकिएको स्तर अनुसार नभएको पाइएको छ । दर्ता भएका १७ हजार पाँच सय ९१ औषधिमध्ये ९ सय १६ प्रकारका औषधिको नमुना परिक्षण गरिएको थियो । र ०१८ मा ९१ प्रकारका औषधि स्तर अनुसार नभएको पाइएको छ। दर्ता भएका १९ हजार सात सय ३९ औषधिमध्ये अनुगमनमा एक हजार चारको परिक्षण गरिएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान पँहुचको हक सुरक्षित गर्ने राज्यको दायित्वलाई नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको छ । स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारीतामा औषधिको मूख्य भूमिका रहने भएकोले औषधि व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ । तर औषधि उपभोगमा जनता ढुक्क हुनुपर्ने अवस्था भने देखिएको छैन ।
Last modified on 2019-04-23 13:42:29
काठमाडौं, ७ भदौं । पन्ध्र शैयाबाट सुरु भएको बसुन्धारास्थित इसान बाल तथा महिला...
आइसियू भन्नेबित्तिकै अधिकांश मानिस डराउँछन् । बिरामी आइसियूमा लगिएको छ भने कतिपयले...
अशिक्षा र गरिबीको कारण अधिकांश महिला पाठेघर समस्याको उपचार नगरी रोग पालेर बस्ने गरेका...
साइकल चढ्नाले पुरुषको यौन स्वास्थ्य वा मूत्र प्रणालीमा कुनै नकारात्मक असर नपर्ने एक...
भदौ अन्तिमसम्म स्वास्थ्य समूहको लोकसेवा खुलाउने तयारीमा सरकार
यस्ता व्यवहार देखिए इन्टरनेटको लत
‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रमका लागि प्रदेश २ मा ८० जना नर्स र अनमी राख्ने तयारी
समायोजनले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा फरक पार्दैन: स्वास्थ्य राज्यमन्त्री यादव
सिटिइभिटीद्धारा नर्सिङ, फार्मेसी, अनमी र सिएमएको भर्ना शुल्क निर्धारण, कुनको कति शुल्क ?
फिजियोथेरापीले भित्री अंगको चोट पनि निको पार्छ
बाँकेका स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोल र जीवनजल समेत छैनन् ।
पित्तथैलीमा पत्थरी किन हुन्छ ? डा. प्रमोद कुमार यादव
अस्पताललाई तत्काल बिजुली उपलब्ध गराउन नेपाल चिकित्सक संघको ७२ घण्टे अल्टिमेटम [ Part2]